သရုပျဆောငျ မောငျဟာ ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရတာကွောငျ့ ဧရာဝတီစငျတာမှာ ဆေးကုသဖို့အတှကျ ရောကျရှိနပေါတယျ
ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရပွီး ဆေးကုသမှုခံယူနရေတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ဝမြှေပေးခဲ့တဲ့ အစီအစဥျတငျဆကျသူ ဇျောဝငျးနိုငျ
ကွျောငွာထောငျကြျောရိုကျကူးခဲ့တဲ့ တခြိနျကကွျောငွာဘုရငျမ ထကျထကျမိုးဦး
ပိုးသတျဆေးဖွနျးဖို့ အကူအညီတောငျးခံပါက ကူညီပေးသှားမယျဆိုတဲ့ တိုငျရှနျ
သှေးရညျကွညျ လှူဒါနျးပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျတဲ့ အဆိုတျောမြိုးကွီး
သဈတံခါးဆရာတျောကွီး ရဲ့ ရှကေံ ငှကေံ ဓာတျဖှငျ့၍ လာဘျချေါ ၊ ဓာတျဆငျနညျး ကိုမြှဝပေေးခဲ့တဲ့ ဆုကဗြာ
မတ်ေတာသင်ျဂဟအဖှဲ့မှ အောငျဆနျးတီဘီရောဂါဆေးရုံကွီးမှ ဆေးရုံဝနျထမျးမြားနှငျ့ လူနာမြားအားလှူဒါနျး
အကယျဒမီနတေိုးက လိုအပျတဲ့နရောမြားအတှကျ လှူဒါနျးလရှေိ့သူပါ။ အခုလညျး စားဝတျနရေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ လူရှငျတျောမြားအတှကျ အလှူငှေ ၁၀သိနျးကပျြကို လူရှငျတျော ဒိနျးဒေါငျမှတဆငျ့လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ကလေးတှရေဲ့ အံ့မခနျးအနုပညာစှမျးရညျတှကေို ကွညျ့ရှုခံစားခဲ့ရတဲ့ DugroSTAR ပွိုငျပှဲ
Profile ofayoung singer Oak Soe Khant
အကယျဒမီမို့မို့မွငျ့အောငျရဲ့မိခငျဒျေါသနျးရငျ ၉၉နှဈလူကွီးရောဂါဖွငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။
တနျဖိုးငှေ(၂,၅၀၀,၀၀၀)သိနျးကပျြတနျဖိုးရှိထောကျပံရေးပစ်စညျးမြားကိုအသြှငျကုမာရ နဲ့ သရုပျဆောငျနထေကျလငျးတို့မှ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျး Covid-19 ယာယီကုသရေးဌာန(ဧရာဝတီစငျတာ)သို့ ပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ကိုနေတိုးဆီကနေပညာတွေအများကြီးရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး
ဒီကားလေးမှာ ကိုနေ တိုးနဲ့အတူတူ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါ ကိုနေတိုးဆီက ပညာတွေလည်း ရ တယ်။ အစကတည်းက ကိုနေတိုးက အရည်အချင်း ပြည့်ဝတဲ့ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အစ် ကိုဆီက ပညာတွေ အများကြီးရပါ တယ်. .…
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ဇာတ်ကားတွေ ပြန်ရိုက်တော့မလား
လန်ဒန်မှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ မီ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ပြသရန် ရွေးချယ်ခံရ
မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေကိုကူညီဖို့ အသင့်ရှိကြောင်းအဆိုတော် အမွန်း က ပြောဆို
ကြိုးစားရုန်းကန်မှုတွေကနေ အောင်မြင်မှုတွေဆီသို့ အရောက်လှမ်းခဲ့ကြတဲ့ Makeup Artists ၄ ဦး
လေး ယောက်စလုံးက မိတ်ကပ်လိမ်းတာ တူပေ မယ့်လည်း သမုဒ္ဒရာရေက တစ်ယောက်တည်း သောက် လို့မကုန်ဘူးလေ။ သူ့အလုပ်သူလုပ်၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပေါ့။ အလုပ်အားတဲ့ အချိန်ဆို ...
လူငယ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ Valentine’s Day
လူငယ် နဲ့ သတင်းအချက်အလက်
Protect Against COVID -19 Education Road Show Program and product donation by BRAND’S Myanmar
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာဟာရဓာတ်ဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်း ဆေးရုံများသည် အာဟာရဓာတ် ပြည့်ဝလာစေရေး ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် လူနာများ၏ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင် လုပ်ကြမလဲ
ကြွေလွှင့်သွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး Go Soo Jung
တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပိုပို
Subscribe လုပ်ရုံနဲ့ Update သတင်းများကို သင့် Email ထဲသို့ လစဉ်ပို့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ခမျြးမွမေ့ောငျခြို ရဲ့ မှေးနအေ့မှတျတရအနနေဲ့ မိခငျဖွဈသူနဲ့ အတူသီဆိုထားတဲ့ မိဘနဲ့ သားသမီးရဲ့ကွား ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ဖျောကြူးထားတဲ့ သမီးခြော့တေး သီခငျြးတပုဒျလဲ အှနျလိုငျးက ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ။
#ZawGyi ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ခံရတဲ့ အဆိုတော်ချမ်းမြေ့မောင်က အခုဆို အသက်၂၁နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ Milestones လေးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ Idol လေးကို အရမ်းချစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့ကကျရောက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ရဲ့ အသက်၂၁နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ ၂၁မြို့မှာရှိတဲ့…
Covid 19 ကူးစကျခံရပွီး ပွနျလညျကောငျးမှနျလာတဲ့ အဆိုတျောနီတာက သူ့ရဲ့သှေးရညျကွညျကို Covid 19ကူးစကျခံလူနာမြား ကုသဖို့အတှကျ ဒုတိယအကွိမျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ
#ZawGyi Covid 19 ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့ အဆိုတော်နီတာက သူ့ရဲ့သွေးရည်ကြည်ကို Covid 19ကူးစက်ခံလူနာများ ကုသဖို့အတွက် ဒုတိယအကြိမ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ Covid 19ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့သူများရဲ့ သွေးရည်ကြည်ဖြင့် ကူးစက်ခံလူနာများကို ကုသပေးလျက်ရှိပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုသာ သွေးရည်ကြည်ဖြင့်…
“မုနျ့ဟငျးခါးရောငျးနပွေီဖွဈတဲ့ အဆိုတျောဂညြေီညီတို့ မိသားစု”
အဆိုတော် ဂျေညီညီတို့ မိသားစု က မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးနာမည်ကိုတော့ စွဲနေပြီလို့ အမည်ပေးထားပြီး ပါဆယ်သီးသန့်ပဲရောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “တစ်ရက်ကို ပွဲ ၅၀ ရောင်းမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားလို့အမြန်မှာပေးတော်မူကြပါ။ မုန့်ဟင်းခါး ညှပ်ခေါက်ဆွဲ ပဲကြော် ဘူးသီးကြော် နဲ့တပွဲ…
သရုပျဆောငျဥက်ကာမငျးမောငျက သူ့ရဲ့မှေးနအေ့လှူအဖွဈခိုငျနှငျးဝေ ပရဟိတဂဟောကို အလှူငှကေပျြ၃သိနျး လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဥက္ကာမင်းမောင်က အခုလက်ရှိ မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဝေးမှာရောက်နေပေမယ့်လည်း သူချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ တော့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်နေ့က သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပါ။ သူ့ရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ခိုင်နှင်းဝေ ပရဟိတဂေဟာကို အလှူငွေကျပ်၃သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။…
အလှူအတန်းတွေ အမြဲမပြတ် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ စမိုင်းက အခု Covid 19 ဒုတိယလှိုင်းမှာလဲ ရိုးမရိပ်သာဆောင်အတွက် အဲကွန်း ၅လုံးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲကွန်း ၅လုံးအတွက် ကျသင့်ငွေ မှာကျပ် ၂၂သိန်း ၅သောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ယနေ့အလှူ ရိုးမရိပ်သာအဆောင်တွေအတွက်…
အဆိုတျောမငျးသမီးခြော စန်ဒီမွငျ့လှငျ ဟာ သွဂုတျလ ၁၂ရကျနမှေ့ာ ၃၄နှဈပွညျ့သှားပါပွီ။ မှေးနတေို့ငျးနအေိမျမှာ အေးခမျြးအောငျမွငျအုတျခှကျဘုရားကို ပငျ့ဆောငျပူဇျောခဲ့ပါတယျ။ အခုနှဈဆိုရငျတော့ ဘုရားပငျ့ဆောငျပူဇျောခဲ့တာ ၈နှဈရှိသှားခဲ့ပါပွီ။ အသကျ၃၄နှဈ ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ရဲ့စိတျခံစားခကျြ သဘောထားနဲ့ပတျသကျပွီး စန်ဒီမွငျ့လှငျက “ဒီနေ့ (၃၄)နှဈ ပွညျ့ခဲ့ပီ။…
YouTube Vlog တှစေတငျရိုကျကူးတော့မဲ့ မျောဒယျ မငျးသမီးခြောလေး ဟနျတီ
YouTube Vlog တှစေတငျရိုကျကူးတော့မဲ့ မျောဒယျ မငျးသမီးခြောလေး ဟနျတီ မျောဒယျ မငျးသမီးခြောလေး ဟနျတီက Han T’s YouTube Vlog လေးရိုကျကူးဖို့အတှကျ ကလောမွို့ကိုရောကျရှိနပေါတယျ။ ပရိသတျတှကေို ခရီးသှားအတှအေ့ကွုံတှေ၊ ဒသေန်တရဗဟုသုတတှေ ရရှိစဖေို့အတှကျ အခုလို…
သဘငျမငျးသားလေး မငျးရှရေောငျတငျက ဆရာကွီးဇဝနရဲ့ ဆိုးပဝေတ်ထူမှာ အဓိကဇာတျဆောငျ ဆိုးပနေရောကနေ သရုပျဆောငျတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။
လေးခှတဈလကျနဲ့ မှဦေးမယျ့ မငျးရှရေောငျတငျ သဘငျမငျးသားလေး မငျးရှရေောငျတငျက ဆရာကွီးဇဝနရဲ့ ဆိုးပဝေတ်ထူမှာ အဓိကဇာတျဆောငျ ဆိုးပနေရောကနေ သရုပျဆောငျတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ကတော့ ဇာတျခုံပျေါမှာလညျး ကပွနတေငျဆကျနကွေဖွဈတာကွောငျ့ အိုကျတငျနဲ့ပတျသကျလို့ကတော့ သိပျမစိမျးလှပါဘူး။ အသကျ၃နှဈလောကျအရှယျကတညျး ဇာတျခုံပျေါမှာကပွတငျဆကျခဲ့တဲ့ မငျးရှရေောငျတငျဟာ အနုပညာနဲ့ပတျသကျလို့ သူ့ရဲ့ဝါသနာနဲ့…
မှေးနအေ့ကွိုအလှူအဖဈွ ရုပျရှငျအဖှဲ့သားအယောကျ 450 ကို လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ဝတျမှုနျ့ရှရေညျ
သရုပျဆောငျ ဝတျမှုံရှရေညျရဲ့ မှေးနအေ့ကွိုလှူဒါနျးမှု မှေးနအေ့ကွိုအလှူအဖွဈ ရုပျရှငျစကျအဖှဲ့ အယောကျ ၄၅ဝကို တဈဦးလြှငျ ဆနျ၁ဝပွညျ,ဆီတဈပိဿာ,ကွကျဥ၁ကတျ,ခေါကျဆှဲခွောကျနဲ့ Face Mask မြားကိုလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ covid ကာလဖွဈတဲ့အတှကျ ရိုကျကူးရေးတှပွေနျမလုပျရသေးတာကွောငျ့ ရုပျရှငျလောကသားတှအေနနေဲ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ အဆငျမပွမှေုမြားစှာ ကွုံတှလေ့ကျြရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့လောကသားတှေ…
“သီခငျြးတှကေို MVလေးနဲ့ပါ တှဲထှကျခငျြတဲ့အတှကျ ကွနျ့ကွာနရေခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောလာတဲ့ အဆိုတျော ခြောစုခငျ´´
“သီခငျြးတှကေို MVလေးနဲ့ပါ တှဲထှကျခငျြတဲ့အတှကျ ကွနျ့ကွာနရေခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောလာတဲ့ အဆိုတျော ခြောစုခငျ´´ အသံပါဝါအားကောငျးကောငျး နဲ့ သီခငျြးတှကေိုသီဆိုတဲ့ အဆိုတျော ခြောစုခငျဟာ အားပေးသူပရိသတျအခိုငျအမာနဲ့ ယနတေို့ငျအောငျမွငျတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျအနနေဲ့ ရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။ ခတျေရစေီးကွောငျး ကူးပွောငျးလာခဲ့သလို ဂီတ အနုပညာဖနျတီးမှုတှလေညျးမြားပွားလာခဲ့တဲ့…
ရှရေောငျးတော့လညျးအဆဲခံရသလို အခုဆနျရောငျးတာကိုတော့မဆဲကွပါနဲ့တော့ဆိုလာတဲ့ ဦးကြျောထူး
ရှရေောငျးတော့လညျးအဆဲခံရသလို အခုဆနျရောငျးတာကိုတော့မဆဲကွပါနဲ့တော့ ဆိုလာတဲ့ ဦးကြျောထူး အခုခတျေမှာ အနုပညာတဈခုတညျးနဲ့ ရပျတညျလို့မရတော့ဘူးလို့ ဟာသသရုပျဆောငျကြျောထူး ကပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျးသူ့အနနေဲ့ ဆနျရောငျးနရေတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဟာသသရုပျဆောငျကြျောထူးက ဇာတျကားတှပွေနျလညျရိုကျကူးခှငျ့ပွုတဲ့နောကျပိုငျးမှာလညျး ဆနျရောငျးတာကို ဆကျလကျလုပျသှားမှာဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ‘’ ဇာတျကားတှပွေနျရိုကျရတဲ့အခြိနျရောကျရငျတော့ သားနဲ့သမီးကိုလှဲထားလိုကျမယျလေ။…
သိနျးတဈထောငျကြျောအကုနျအကခြံဆောကျလုပျလှူဒါနျးမယျ့ အဆိုတျောမလေး မခေ့ဈြသကျရဲ့တံတားအလှူ
မခေ့ဈြသကျနဲ့အတူ အလှူရှငျမြား၊ ပရိသတျမြားအားလုံးစုပေါငျးဆောကျလုပျလှူဒါနျးကွမယျ့ တံတားတညျနရောကတော့ ကြောကျကွီးတောငျတောရအရှဘေ့ကျတောငျခွေ(ဆငျသခြေောငျး)မှာဖွဈပါတယျ။ ရနျကုနျ-မန်တလေးအမွနျလမျးမကွီး မိုငျတိုငျအမှတျ ၂၄၉မိုငျ၊ ၆ဖာလုံကနသှေားမယျဆိုရငျ ၅မိုငျခှဲခရီးရှိပါတယျ။ အဲဒီဒသေမှာရှိတဲ့ရှာပေါငျးမြားစှာဟာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့မြားစှာလိုအပျနသေေးတယျ။ အဓိကအခကျြဖွဈတဲ့သှားလာရေးအခကျအခဲကို မခေ့ဈြသကျက ကြောကျကွီးတောငျကိုသှားရောကျရငျး တှရှေိ့သှားခဲ့ပါတယျ။ တံတားဆောကျလုပျမယျ့ကုနျကငြှဟော စုစုပေါငျးပမျြးပြှ ကပျြ သိနျးတဈထောငျပမာဏခနျ့ရှိတာကွောငျ့…
ကလေးတွေအတွက် Mask ၀ယ်ဖို့ ကိုရီးယားငွေ ၂၀မီလီယမ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Kim Chung Ha
ကလေးတွေအတွက် Mask ၀ယ်ဖို့ ကိုရီးယားငွေ ၂၀မီလီယမ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Kim Chung Ha #Zawgyi Kim Chung Ha က သူရဲ့မွေးနေ့မှာ အလှူဒါနလေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ရက်နေ့ကကျရောက်တဲ့ သူရဲ့မွေးနေ့မှာ Mask…
T Fitness Applicationကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် သန္တာလှိုင်
T Fitness Application ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ် သန္တာလှိုင် #Zawgyi မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများ အားကျရတဲ့ အနုပညာရှင်များထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်သန္တာလှိုင်ဟာဆိုရင် ယခုချိန်ထိ အလှမပျက်ဘဲ အားလုံးအားကျရပြီး Bodyကော၊ အလှအပမှာပါ စံထားရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး…
VinSmart သညျ ၎င်းငျး၏ ဒုတိယမျြိးဆကျ စမတျဖုနျးမမျဒယျမျြးတှငျ ကိုယျွိုငျ Operating System ဗျးရှငျးအသဈ VOS 2.0 အျး ထညျသှငျးအသျုးပွ ထျးပျွး 5G စမတျဖုနျးမျြး ထုတျလျွုသျှးနိုငျရနျ အတှကျလညျး Fujitsu, Qualcomm တို့နှငျွးမွေါငျးလျွုမဆ ငျလကျြရှိ
VinSmart သညျ မကကွာသသေးမီက ၎င်းငျေး၏ စမတျဖုနျေး သမျွာဒယျအမေးအစွာေးအသဈ ၄ မေး ဖဖဈသညျBee ၊ Star ၊ Joy 2+ နှငျ…
Fortune TV hosts the largest and most prestigious torch launch in Yangon for the first time in 500 consecutive launches…
ရန်ကုန်မြို့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မီးပုံးပျံအလုံး ၅၀၀ တစ်ပြိုင်တည်းလွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အစည်ကားဆုံး တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲကြီးကို Fortune TV မှစီစဉ်ကျင်းပ။
#Zawgyi ရန်​ကုန်​မြို့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်​အဖြစ်​ မီးပုံးပျံအလုံး ၅၀၀ တစ်​ပြိုင်​တည်းလွှတ်​တင်​ခဲ့တဲ့ အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အစည်​ကားဆုံး တန်​​ဆောင်​တိုင်​မီးထွန်းပွဲကြီးကို Fortune TV မှစီစဉ်ကျင်းပ။ Fortune TV ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ ​​အကြီးကျယ်​ဆုံးနဲ့ အခမ်းနားဆုံးဖြစ်​တဲ့ တန်​​ဆောင်​တိုင်​မီးထွန်းပွဲ​တော်​ကြီးကို ၈.၁၁.၂၀၁၉ မှ ၁၂.၁၁.၂၀၁၉အထိ…
သုဓမ်မသိင်ျဂိ အဆိုတျောကွာညိုသှယျမိသားစု၏ ကထိနျအလှုဒါန
သုဓမ္မသိင်္ဂိ အဆိုတော်ကြာညိုသွယ်မိသားစု၏ ကထိန်အလှုဒါန နှစ်ဖက်မိဘများအားအမှုထား၍ ကပ္ပတိန်ဂျွန်ခင်လှ+ သုဓမ္မသိင်္ဂိ ဒေါ်လယ်လယ်အောင်(တေး သံရှင်ကြာညိုသွယ် )မိသားစုမှသံသရာစခန်း လွတ်လမ်းမျှော်ရည်နိဗ္ဗာန်ဆီသို့ ရည်သန်ရှေးရှုအာရုံပြုလျက် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒကအားအမှူးထားပြီး ကထိန်ဉာတ်သက်န်းကပ်လှုခြင်း ၊ကျောင်းတိုက်အတွက် မတည်အလှုတော်ငွေကျပ် ၁၅သိန်းကျပ် တိတိလှုဒါန်းခြင်း၊ပင့်သံဃာအပါး၂၀တို့အား သက်န်းလှုဖွယ်ဝတ္ထုနှင့်ဆွမ်း၊ခဲဖွယ်တို့ကို ဆက်ကပ်လှုဒါန်းခြင်းတို့ကို ယနေ့…
#ZawGyi ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဥရောပရဲ့ကျော်ကြားသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့် Taste Of London ပွဲတော်ကြီးဟာအရသာရှိတဲ့စားဖွယ်ရာများကိုတနေရာထဲမှာစားသုံးနိုင်သောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင် Chang Beer ကလည်း Taste of London ပွဲတော်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။စိတ်မပူပါနဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်း Chang Beer ကိုသောက်သုံးဖို့အတွက် London အထိတကူးတကသွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့…
“မွနျမာနိုငျငံတှငျထုတျလုပျမညျ့ Chang Lager Beer ကိုနောကျဆုံးပျေါ ခတျေမီ စကျသဈကွီးမြားဖွငျ့ စတငျထုတျလုပျသှားမညျဖွဈပွီး တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာဖွငျ့ စတငျ ဖွနျ့ခြိပေးသှားမညျ။”
Fraser and Neave, Limited (F&N) သညျ မွနျမာနိုငျငံ၌ အမရေိကနျဒျေါလာသနျး (၇၀) ရငျးနှီးမွှုပျနှံထားပွီး Emerald Brewery Myanmar Limited ၏ Chang Beer စကျရုံအား ရနျကုနျတိုငျး၊ လှညျးကူးမွို့နယျတှငျ…
ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် Our Skyy ဇာတ်လမ်းတွဲမှ သရုပ်ဆောင် Krist နဲ့ Tayတို့က ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် လန်းဆန်းပျော်ရွှင်မှုတွေ သယ်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့ Oishi Green Tea Special Day with Krist & Tay in Myanmar ပွဲ
Oishi Green Tea က Our Skyy ဇာတ်လမ်းတွဲမှ အမိုက်စားအနုပညာရှင်၂ဦးဖြစ်တဲ့ Krist နဲ့ Tay တို့ကို ပရိသတ်တွေ အနီးကပ်တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ Oishi Green Tea Special Day with…
“DugroကနေDugroSTAR ပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပတော့မယ့်သတင်းလေးတွေ့လိုက်လို့မေမေတို့သိရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်”
DugroကနေDugroSTAR ပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပတော့မယ့်သတင်းလေးတွေ့လိုက်လို့မေမေတို့သိရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပြိုင်ပွဲအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင့်။ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့အိပ်မက်ကိုပုံဖော်ဖို့DugroSTAR ပြိုင်ပွဲကြီးရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ အဆို၊အက၊အတီး၊သရုပ်ပြတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ဝါသနာပါတဲ့ကလေးတိုင်း တစ်ဦးချင်းဖြစ်ဖြစ်၊အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ DugroSTAR Scholarship Fees သိန်း (၃၀) နှင့်အတူအခြားဆုလက်ဆောင်များစွာရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အသက် (၂) နှစ်အထက်ကနေ (၉) နှစ်အတွင်းသားသားမီးမီးတိုင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်နော်။…
ဖွေးဖွေးက ကျွန်တော့ရဲ့ Idol ပါလို့ ပြောပြခဲ့တဲ့ ချာလီ
အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ မင်းသမီးဆိုတော့ စပြီးရိုက်တုန်းက ရင်ခုန်တယ်။ ကြောက်လည်းကြောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ .....
အိမ်ထောင်ကျသွားပြီးမှ ကံပိုကောင်းလာတယ် ဆိုတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
အိမ်ထောင်ကျသွား မှ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြော ရမယ်။ အရင်က အပျိုဘ၀ ကထက်တောင် လူတွေ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပို သိလာတယ်....
စက်တင်ဘာလ မွေးနေ့ထဲမှာ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်မယ့် ရှင်ဖုန်း
စက်တင်ဘာက ရှင်ဖုန်းရဲ့ မွေးနေ့ပေါ့နော်။ မွေးနေ့မှာ ရှင်ဖုန်း ရဲ့Single Song လေးဖြစ် တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရှင်ဖုန်းအွန်လိုင်းမှာ အမ်တီဗီအနေနဲ့တင်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအ ခါကျလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ....
သီဆိုပြိုင်ပွဲ တစ်ခုက အကဲဖြတ်ဒိုင် အဖြစ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ငြင်းပယ် လိုက်တဲ့ အဆိုတော် မင်းသား စိုးသူ
ကျွန်တော် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲနာ မည်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ကမ်း လှမ်းခံခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ........
ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးမရိုက်ဘဲ တစ်ကားဆို တစ်ကား ကောင်းအောင်ပဲ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ နေတိုး
ကိုယ့်အနေနဲ့ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ပေါ့နော်တစ်ကားဆို တစ်ကားပရိသတ်ကြည့်ရကျိုးနပ်တဲ့ ကားလေးလည်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အခု လိုမျိုးသေသေသပ်သပ်ရိုက်ခွင့်ရှိတဲ့ ရိုက်လို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာတည်တည်တံ့တံ့နဲ့အလုပ်လုပ်ပါမယ်။......
သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ စူပါပါဝါက ဘာလဲ
ဘယ်လောက်မူးမူး ကားတစ်ချက်မတိုက်ဘဲနဲ့ အိမ်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကား မောင်းပြီးပြန်နိုင်တယ်။ အဲဒါက သင်ဇာ့ရဲ့ စူပါပါဝါပေ့ါ.........
မြန်မာရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာ အခွင့်ရေးကောင်း တစ်ခုပါ ဆိုတဲ့ ထိုင်းမော်ဒယ် MaeYa Sunssun
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့လက်ခံဖြစ် တာကတော့ ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံဖြစ်တာပါ....
သူရွေးချယ်မယ့် ချစ်သူပုံစံကို ပြောပြခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင် မိုးစက်ဝိုင်
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် ဘယ်လိုလူမျိုးကို ရွေးချယ်မှာလဲဆိုရင် အဓိကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့လူပေါ့.....
ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့ Game Of Thrones နောက်ဆုံး ရာသီ ဇာတ်လမ်းတွဲ နမူနာပြသ
အချိန် နှစ်မိနစ်နီးပါးရှိတဲ့နမူနာကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူဟာ အင်္ဂါနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာတင် ၁၁ သန်းကျော် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဇာတ်ကားရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတွစ်တာမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စတင်ပြသမယ့် ရက်က လာမယ့်ဧပြီလ...
ပခုက္ကူနယ် ရွှေတန့်တစ် သရက္ခန် မြတ်စွာဘုရား နှစ် ၉ဝဝပြည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်
ရွှေ တန့်တစ်သရက္ခန်ပွဲတော်ကြီးအား ပခုက္ကူမြို့သစ် ရေစကြိုကားလမ်းထိပ် မုခ်ဦးဖွင့်ပွဲ ၁၂-၅-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့ တွင် တာတာလင်းစည်တော်ဖြင့် ဖွင့် လှစ်ခြင်း မေ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက် နေ့ညများတွင်. . .
ငါ့ကိုနမ်းတဲ့မုန်​တိုင်း ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ရဲရင့်​အောင်​ အကယ်ဒမီ ရင်​ခုန်​သံ
အဆိုတော် အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေ အားပေးကြရုံသာမက သရုပ်ဆောင်​တစ်ယောက်​အဖြစ်နဲ့ပါ ပရိ သတ်တွေ လက်ခံကြတဲ့ အနုပညာရှင်​ကတော့ ရဲရင့်အောင်ပါ။ လွှမ်းပိုင်၊ ဖွေးဖွေးတို့နဲ့အတူ သူပါဝင်​သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ငါ့ကိုနမ်းတဲ့မုန်တိုင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း အကယ်ဒမီ ဆန်ကာတင်​ ၂၅ ကား စာရင်းထဲ…
သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေပဲ ရွေးချယ်ရိုက်ကူး ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် ဒါရိုက်တာ ဗန်းကြီး ရှင်းပြ
ဒါရိုက်တာဗန်းကြီးဟာ 'ဥပါဒါန်' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဆိုလည်း သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေကို အဓိကထားပြပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တစ်ခုလုံးကောင်းမွန်အောင် ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် အသစ်တွေပဲ ရွေးချယ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တော်တော်များများ ရိုက်ကူးဖြစ်နေပုံကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါရိုက်တာ ဗန်းကြီးက . .…
မကြာခင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ့် ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းတွင် သဘင် သရုပ်ဆောင်ပညာသင်ကြားပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ သဘင်အစည်းအရုံးနဲ့ လာရောက်ညှိနှိုင်း
''အခုမှ ဆွေးနွေးတုန်း အဆင့်ပါ။ သူတို့က မြန်မာရဲ့ Taste ကိုများများ လိုချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို သူတို့ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ သူတို့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့လည်း မေးမြန်းကြတယ်။ ဇာတ်သဘင်နဲ့ ရုပ်ရှင်မှာက အိုက်တင်ချင်း မတူဘူးလေ။ ဇာတ်စင်ပေါ်မှာလုပ်ရတဲ့…
မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်သေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတိုက်တစ်ခုတည် ထောင်သွားချင်တဲ့ ဦးထွေး (ထွေးဦး မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရုပ်စုံ)
''ပြတိုက်တင် မဟုတ်ဘူး။ Puppetry Centre ပေါ့။ အခု ဦးထွေးရဲ့အိမ်ကို HTWE OO MYANMAR Puppetry HOME လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။ တကယ်လို့ အခွင့်အရေးပေးလို့ နိုင်ငံတော်ကများ ထောက်ပံ့လို့ မြေကွက် ကျယ်ကျယ်လေး…
‘အရင်လိုမပတ်သက် တော့ပါ’ တေးစီးရီးနဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်ရဲ့ ဂီတခြေလှမ်း
''ကျွန်တော်က ဒီဂီတကို ချစ်လို့လုပ်တာ။ ကျွန်တော် သည် တစ်နေရာမှာ ဖြတ်သန်းနေမယ်။ ကျွန်တော် သေဆုံးသွားခြင်းဆိုတာ မရှိဘူး။ မင်းခန့်ကျော်သည် တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ရပ်တည်နေမယ်ဆိုတဲ့ သဘော ပါ။ ထင်တာတော့ သရုပ်ဆောင်ဘက်က ပျက်စီးနေကြ တာတော့အမှန်ပဲလေ။ ဒါပေမဲ့…
''တကယ်တော့ ကိုယ်က သိပ်တော့ မသင်တတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက သင်ပေးပါ၊ သင်ပေးပါလို့ ပြောကြတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတွေကလည်း ပြောတယ်။ ကိုယ့်မောင်တွေ ညီမတွေကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းပေးရမယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့…
သဘင်အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အ စွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတဲ့ဟန်ဇာမိုးဝင်း
''ကျွန်တော်တို့ကို မျိုးရိုးစဉ် ဆက် အားပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ရောက်မှ အားပေးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်။ မောင် နှမသုံးယောက်လုံးကို ချစ်ပြီး အား ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိတယ်။ ဒါ မှမဟုတ် ကျွန်တော့်တစ်ယောက် တည်းကိုပဲ ချစ်လို့အားပေးခဲ့တဲ့သူ တွေလည်းရှိတယ်။ စံပြပရိသတ်က မျိုးစုံသောအားပေးမှုတွေနဲ့…
ဖခင်ဖြစ်သူ နိုင်မြန်မာဆီက ရလိုက်တဲ့ ဂီတအမွေနဲ့ ရွှေဘုံနိဒါန်းစတူဒီယိုကိုပဲ့ကိုင်နေသူ ရာဇဝင်
သူက ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော်ဗျူဟာရဲ့ ညီလည်းဖြစ်သလို သူတို့ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ သီချင်းတွေ မွေးထုတ်ပေးရာ ရွှေဘုံနိဒါန်း Music Production ရဲ့ Audio Engineer တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်လောက်ကနေ စခဲ့တဲ့ ရွှေဘုံနိဒါန်းစတူဒီယိုရဲ့ အစက အခက်အခဲတွေ အများကြီးနဲ့ပါ။…
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ပိုရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြေဇင်
သရုပ်ဆောင် ပြေဇင်ကတော့ လတ်တလောမှာ ဒါရိုက်တာ ကျော်သူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၁ဝ၁၄ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗီဒီယို ဈေးကွက် ပျောက်ကွယ်ဆဲဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲလို့…
ရေခဲတောင်မှာ သွားရိုက်မယ့် ရုပ်ရှင် ကားကြီးအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
"ရေခဲတောင်မှာ သွားရိုက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက် ပြီးလို့ကတော့ လုံလုံခြုံခြုံပဲ ဝတ်ရမှာပဲပေါ့နော် (ရယ်လျက်)။ ဒါရိုက်တာက အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေထားတာ တွေ့ရတယ်။ အင်္ကျီမပါဘဲနဲ့ ရိုက်ရမယ့် အခန်းတွေပါတယ်ဆိုပြီး အဲဒါကလည်း ဇာတ်လမ်းထဲက နောက်ဆုံးခန်းက အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပါတာပါ။ လိုအပ်ရင်လည်း…
ဂီတသမားတွေရဲ့ သီချင်းတွေကို FM ရေဒီယိုတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့အခါ ဂီတအစည်းအရုံးက ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနေသလဲဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ဦးဇော်ထူးအောင်
''City FM က စသုံးတယ်။ မရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ City FM က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အနုပညာကြေး ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အရင်တုန်းက မရခဲ့ဘူးလေ။ အခုပေးမယ့်သူရောက်…
သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အတွက် ဝမ်းစာပြည့်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ ကျော်ဆု
ဗီဒီယိုဈေးကွက် သိပ်မရှိတော့တဲ့အချိန် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကြောင့် သရုပ်ဆောင်တွေ၊ သရုပ်ဆောင် အသစ်တွေ နေရာရလာကြပြီ။ ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုတွေ၊ ပရိသတ်ရဲ့ အချစ်တွေ ရရှိခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ တော်တော်များများမှာ ကာရိုက်တာတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူဘဲ ရိုက်ဖြစ်ပုံက…
ကွင်းထဲသာ အရောက်လာခဲ့၊ အားလုံးတာဝန်ယူတယ်လို့ ဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့ ထူးအယ်လင်း
''ကျွန်တော်တို့ မုဒိတာအသင်းအတွက် ကွမ်းခြံ ကုန်းမှာ ပြုလုပ်မယ့် မုဒိတာအသင်းရှိုးပွဲရန်ပုံငွေ ဆိုင် ကယ်ချစ်သူ ညီအစ်ကိုတွေ မိဿဟာရတွေ့ဆုံပွဲလေးကို ၃ လပိုင်း ၂၉ ရက်နဲ့ ၃ဝ ရက်တို့မှာ နှစ်ရက်တိုင် တိုင် ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ…
‘သမီးရှင်’ဗျူဟာရဲ့ သားနဲ့သမီးအပေါ် ထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်
'သမီးရှင်' သီချင်းနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော် ဗျူဟာတစ်ယောက် အခုတော့ သမီးရှင်သာမက သားရှင်တစ်ယောက်ပါ ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ သူအနည်းငယ် ပျောက်နေတာက အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက် သားနဲ့သမီးကို ပြုစုပျိုးထောင်နေရ တာနဲ့ သီချင်းဘက်မှာ နည်းနည်း နှောင့်နှေးခဲ့တာပါလို့ ဗျူဟာက ဆိုပါတယ်…
ချန်ပီယံ အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ သွားကြိုနိုင်ပြီ
မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင် စည်သူမောင်ကလည်း ''ကျွန် တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်ရင် စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင် ချန်ပီယံနဲ့လည်း ဝေးခဲ့ဖူးတာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး မြန်မာ့လက် ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းက ချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်…
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး လာရိုက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အက်ရှင်ဇာတ်ကား Line Walker -2 (Operation Midnight Shadow)
ဟောင်ကောင်ရဲ့ နာမည်ကျော် အက်ရှင်ဒရမ်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Line Walker -2 (Operation Midnight Shadow) ကို မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်ကနေ ပြီး 2၆ ရက်နေ့အထိ ရိုက်ကူးတင်…
အသစ်​တစ်ယောက်​အနေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများတဲ့ ဇာတ်ကားအကြောင်း ခါရာ ပြောပြ
''ကိုယ်ပါဝင်​သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ကားကိုတော့ ယုံကြည်မှု ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းသားဝိတ်တွေ ဘာတွေကြည့်လာပြီဆိုရင် နည်းနည်းစိုးရိမ်တာ တော့ရှိတယ်။ ဒီဇာတ်​ကားထဲမှာက အကုန်​လုံးနီးပါးက လူသစ်​တွေကြီးပဲ။ ကိုယ်ကလည်း ဒီကားမှာ အများကြီး ကြိုးစားထားတယ်။ ဇာတ်လမ်းကလည်း တကယ်တော့ Trailer ထက်…
အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် ဇာတ်ကားများကို အကဲဖြတ် အဖွဲ့မှ ဒုတိယအဆင့် အနေနဲ့ စတင်ကြည့်ရှုနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ
''ဒီနှစ်ထူးခြားတာက အရင်နှစ် တွေတုန်းက ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ၇ ဖွဲ့ရှိတယ်။ဒီနှစ်ကကျတော့ ဇာတ် ပို့ဇာတ်ရံအတွက် တစ်ဖွဲ့သပ်သပ် ထပ်ထည့်ပေးထားတယ်။ အစကကျ တော့ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကနေပဲ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံကိုလည်းသူပဲပေးတာ၊ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကိုလည်း သူပဲ ပေးတာပါ။ ဒီနှစ်ကဇာတ်ပို့ဇာတ် ရံအတွက် ထပ်ထည့်ပေးထားတော့…
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်မှာ မိတ်ကပ် Special effect ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ့် ကိုအောင်ကျော်ထွန်း
''အဓိကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်သည် အလှရုပ်ရှင် မဟုတ်ပါ။ သဘာဝရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သဘာဝတွေကို ဖန်တီးတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ကပ်တွေနဲ့ သဘာဝ အကျဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးမှာ ပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဆင်းရဲသား အခန်းမှာ နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးအောင်တော့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးမှာပါ .…
တရုတ်ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ရင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အများကြီး တိုးတက်သွားမယ်လို့ ဒါရိုက်တာ ညီညီထွန်းလွင်ပြော
အခုနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ သရဲကား တွေဘာတွေဆိုရင် ကြည့်ရတာ အရသာ ပိုရှိလာတာပေါ့။ နည်းနည်းလည်းအဆင့်မြင့် လာတယ်။ ပြီးတော့ ပရိသတ်ကလည်းမြင့်လာတယ်။ ပရိသတ်ကလည်း ဘယ်ကားကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတာ သူတို့ကလည်းသိလာကြတယ်။ ပိုက်ဆံရကောင်းရမယ်။ ဒါပေမဲ့အရည်အသွေးက...
စောဖိုးခွားရဲ့နောက် မြန်မာပြည် Raggae ဂီတမှာ ဘယ်သူနေရာယူမလဲ
''ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်က ဂီတလုပ်တာထက် ဂီတကို အသုံးပြုပြီး တော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဝန်းကျင်ကနေ၊ ဒါမှမဟုတ် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်၊ ဒီ့ထက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထပ်ပြောရရင် ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပေါ့နော်။ ငြိမ်းချမ်ရေးအတွက်ကို Message ကိုပေးနိုင်တဲ့...
ဖခငျဖွဈသူ ကိုဗဈ၁၉ရောဂါဖွငျ့ ရုတျတရကျကှယျလှနျသှားတဲ့အတှကျ ဖွမေဆညျနိုငျအောငျ ဖွဈနတေဲ့ ဒါရိုကျတာထူးပိုငျဇျောဦး 12.8k views
ကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရပွီး ဆေးကုသမှုခံယူနရေတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ဝမြှေပေးခဲ့တဲ့ အစီအစဥျတငျဆကျသူ ဇျောဝငျးနိုငျ 6k views
အကယျဒမီမို့မို့မွငျ့အောငျရဲ့မိခငျဒျေါသနျးရငျ ၉၉နှဈလူကွီးရောဂါဖွငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ 4.7k views
ကွျောငွာထောငျကြျောရိုကျကူးခဲ့တဲ့ တခြိနျကကွျောငွာဘုရငျမ ထကျထကျမိုးဦး 3.2k views
ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါ ကူးစကျခံရပွီးပွနျလညျကောငျးမှနျလာတဲ့ အဆိုတျောမြိုးကွီးတို့ ဇနီးမောငျနှံနဲ့အဖှဲ့ဟာ ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါ ပွငျးထနျလူနာမြားကို ဆေးကုသဖို့အတှကျ သှေးရညျကွညျဒုတိယအကွိမျ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ 2.6k views
ဘရက်ပစ်နဲ့ ဇနီးဟောင်း ဂျနီဖာ အနစ္စတန် ပြန်ပြောင်းထုတ်တော့မှာလားဆိုတာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေ
“India’s Most Wanted” ဇာတ်ကား မေ ၂၄ မှာ ရုံတင်ပြသတော့မည်
မြောက်အမေရိကားမှာ ပြသတော့မယ့် ကိုရီးယား ဟာသကား Extreme Job
ဒစ္စနေးက ပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ အာလာဒင် ဇာတ်ကားသစ် မေ ၂၄ မှာ ရုံတင်မည်
ရိုက်ကူးရေး လုပ်နေရင်း အဖွဲ့သား ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ Kingdom
Events, Social & News
ဒါရိုက်တာမိုက်တီး ဆေးကုသခွင့် အာမခံရရှိ
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ အကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်နေတာကို သိဖို့ သိပ်ပြီး အရေးကြီးပါတယ်
မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးအား ၂၉ ကြိမ်မြောက် မသိုးမြတ်သင်္ကန်းတော် ရက်လုပ်လှူဒါန်းပူဇော်
သာမညဖလ အခါတော်နေ့ (သို့မဟုတ်) တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်